ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ဖို့ လွှတ်တော်အမတ်တွေလက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုမယ်
2 ธ.ค. 2562 - 19:00 น.
ယာယီရပ်နားထားတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကို ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အထူးအစည်းအဝေးအနေနဲ့ အမြန်ဆုံးခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ဖို့အရေး တိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေစုစည်းလက်မှတ်ထိုးပြီး တောင်းဆို သွားကြမယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဇေယျက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုလာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ခေါ်ယူကျင်းပသွား မယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
'' အဓိက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစီရင်ခံစာကို စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက တင်ထားတာလည်းကြာပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့အကြိမ်တွေမှာလည်း ဆွေးနွေးခွင့်မရခဲ့ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ မှာလည်း လွှတ်တော်က ထောက်ပြတာတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့က ဘာတစ်ခုမှ တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိဘူး။ ဒီတော့ ရှေ့ကပြောထား တဲ့စီမံကိန်းဆွေးနွေးချက်တွေကို ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ မှာဘယ်လိုတွေ ဆောင်ရွက်ထား လဲဆိုတာလည်း သိချင်တယ်။ လိုအပ်တာတွေကို လွှတ်တော်က အချိန်မီထောက်ပြနိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်''လို့ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဇေယျကဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်စည်ပင်ကော်မတီဝင်သစ်တွေနဲ့ ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးနေဆဲ ရန်ကုန်အစိုးရဘတ်ဂျက် ပြဿနာ
စင်္ကာပူထက် ၂ ဆ ကျယ်ဝန်းမယ့် ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုကြသူများ
ယခင်က စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကြည့်ရှုဝေဖန်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အစီရင်ခံစာကစပြီး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အမတ်တွေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခွင့် မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကလုပ်ဆောင်မယ့် စီမံကိန်းအများစုရဲ့အားနည်းချက်တွေကို လွှတ်တော်က ထောက်ပြတာ၊ အချို့သောစီမံကိန်းတွေကို ကန့်ကွက်တာတွေရှိခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အခုလိုကန့်သတ်ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိမှာ စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာကို ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီက လေ့လာတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်လာမှသာ တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဆွေးနွေးခွင့် ရရှိတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
' ' အစီရင်ခံစာက အရေးပါတယ်ဆိုတာ အစိုးရအဖွဲ့ ဌာနတစ်ခုချင်းစီရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကို စာရင်းစစ်ချုပ်ကထောက်ပြပြီးတော့မှ ဆွေးနွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း အတွက် အရေးပါတဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်တယ်။နောက်နှစ်တွေမှာဘာတွေကို ဆောင်ရွက်သင့်တယ် ဘာတွေ တော့မလုပ်သင့်ဘူး။ မြေယာငှားတဲ့ကိစ္စတွေကစလို့ပေါ့ အကုန်လုံးပါနေတာ။''လို့ လက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုမယ့်ထဲမှာပါတဲ့ အလုံမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ စီမံကိန်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အများ ပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ်သစ်အဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တဲ့ YBS စနစ်မှာလည်း ၃နှစ်ကြာတဲ့ တိုင်အမြတ်မရလို့ဆိုပြီး ရှယ်ယာရှင်တွေအနေနဲ့ ရှယ်ယာတွေပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့ တောင်းဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
' ' ဘတ်ဂျက်နဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့ YUBT ကုမ္ပဏီမှာလည်းပြင်ပရှယ်ယာရှင်တွေနဲ့ ပြဿနာတက်နေတာ တွေရှိတယ်။ ဒါက အများပြည်သူဘတ်ဂျက်နဲ့လုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်လို့ ဒီလိုကိစ္စတွေမှာလည်း သိချင် တယ်'' လို့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးအမြန်ဆုံး ခေါ်ယူလို့တဲ့အချက်တချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်ဇေယျကပြောပြပါတယ်။
ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့ ပြည်သူ့ငွေစရင်းကော်မတီတို့က ကော်မတီဝင်တွေက လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး လက်ရှိမှာ အမတ် ၂၀ ဝန်းကျင်ထိရှိပြီးနောက်ထပ် ပါဝင်မယ့်သူတွေရှိသေးတယ်လို့လည်း ဦးကျော်ဇေယျ ကပြောပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အရ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အမတ်ရာခိုင်နှုန်းရဲ့လေးပုံတစ်ပုံက တောင်းဆိုပါက လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ဖို့ လွှတ်တော်အမတ်တွေလက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုမယ်